Disadisan-tokantrano :: Vehivavy voatondro ho nandoro ny tranon’ny vadiny • AoRaha
Disadisan-tokantrano Vehivavy voatondro ho nandoro ny tranon’ny vadiny
Nogadraina vonjimaika ny vehivavy iray voatondro ho ninia nandoro ny tranon’ny vadiny tany Ambodifotatra any Nosy Sainte-Marie, tamin’ny talata hariva lasa teo. Entana maro mitenti-bidy an-tapitrisany sy vola roa hetsy ariary no levon’ny afo tamin’izany hain-trano izany. Tsy nisy kosa ny naratra sy ny aina nafoy.
Nanomboka tamin’ny fito ora latsaka fahefany no nirehetan’ny trano nipetrahan’ny lehilahy iray mpitondra an’irony kodiarantelo antsoina hoe Bajaj irony. Namonjy sy namono ny afo haingana ny fokonolona. Tamin’ny fito ora sy sasany vao voafehy tanteraka ny firehetana.
Nantsoina ny polisy. Fantatra fa ny vadin’io lehilahy niharam-boina io ihany no nandoro ny trano. Nosamborina avy hatrany ilay voarohirohy. Natao ny fanadihadiana.
« Mpivady ara-dalàna sady efa manan-janaka izy mivady ireo saingy nisy olana, tamin’ny volana febroary lasa teo, izay niafara tamin’ny fisarahana. Resaka vola fanampiana sy ny fifaneraseran’ ilay lehilahy no tombanana ho fototry ny disadisa niafara tamin’izao voina izao », araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny polisy nanao ny famotorana.